Bhutsu nyoro nyorova
Ungasarudza sei mwana anopukuta?
Mumatanho mana akareruka, dzidzisa iwe kusarudza yakachengeteka pukuta! 1: Tarisa zvigadzirwa uye kurongedza. Vabereki vanofanira kutenga vacheche vanyorova kubva kumatanho enguva dzose, uye vanofanira kunyatsovatarisa pavanosarudza: Kune zvigadzirwa zvigadzirwa, zvakanakisa kusarudza zvigadzirwa zvinonyorwa kuti hazvisi conta ...
Usasarudze zvisvinu zvinopukutwa zvinoshandiswa nemwana wako mazuva ese!
Mushure mekuve nemwana, zvinyoro nyorova zvave izvo zvinofanirwa-kuva zvemhuri. Kunyanya kana iwe uchiburitsa mwana wako kunze, zviri nyore kutakura, unogona kupukuta mbongoro yako kana tsvina yako uye pee, unogona kupukuta maoko emwana wako kana akasviba, uye iwe unogona kuakanda kure kana iwo akasviba, elimina .. .
Infant wet wipes wongororo: aya manyoro akapukuta ave muchetura unopukuta
Sezvo hupenyu hwehunhu huri kuwedzera kuve nani uye zviri nani, pfungwa yevanhu yekuchengeta vana iri kuchinja zvishoma nezvishoma, kunyanya avo vechidiki vakazvarwa muma80s uye ma90 avo vanofanirwa kutarisisa kunaka kwehupenyu. Mumeso evabereki vadiki, maitiro echizvarwa chekare achipukuta ev ...
Zvinhu zvakanaka ｜ Anokosha ekuchenesa anopukuta pasi majaketi, akapfava uye asiri kukuvadza maoko.
Nekuda kwekuti vanhu vanotya kusvibiswa, havasi vese vanotsunga kutenga mbatya dzakatsvuka, kunyanya dzakachena dzakachena? Homwe dzembatya dzaive nhema uye yero, uye asingazivi akasimudza ruoko rwake kuti aone kuti akamutarisa nemaziso anosemesa! Paunenge uchichinja mbatya, pfeka ...
Wet kupukuta kwakagadzirwa ne100% donje vane ganda-vane hushamwari uye vakapfava, vanokodzera risingagumi kudzikinura
Ini ndinoshandisa nyoro nyoro zuva rega rega, asi hapana chaicho zvinhu zviviri zvinoita kuti ndinakidzwe. Vazhinji vavo vakaita sevapfuuri- hapana… hapana pfungwa yehupenyu. Iyo 100% yekotoni kumeso yekuchenesa nyoro nyowani yandaishandisa nguva pfupi yadarika yakandipa pfungwa yekushamisika kuwana zvakanaka zvinhu. Kunyorovesa, kuganda-ganda, uye saka ...
Doro rinouraya utachiona, simba rekudzivirira pasina kutsamwa, uye kudzivirira hutachiona.
Mudzidzi Li Lanjuan, nhengo yeboka repamusoro rehunyanzvi reNational Health Commission, akasimbisa pachena pamusangano wevatori venhau kuti: “Coronavirus nyowani inotya doro uye haipikisi tembiricha yakakwira. Zvinoenderana nezvakaitika kare necoronaviruses, ether, 75 ...
Maitiro ekusarudza akakodzera mwana anopukuta emwana wako？
Macheche anopukuta anogona kunzi anofanirwa-kuva nechinhu chekufamba pamba. Unofanirwa kushandura manapukeni emwana wako wopukuta maoko nemuromo. Kunyangwe zvipukuta zvevacheche zvinoonekwa se "zvinoshandiswa", zvinonyanya kushandiswa pakuchenesa, asi kana iwe uchida kuzvisarudzira nokungwarira, pane st ...
Bvudzi romusoro rinochenesa rinopukuta
Muna Zvita 2020, ZVAKANAKA zvakaparura bvudzi nyowani uye yekuchenesa ganda remusoro. Iyo isiri-mishonga inoraswa unopukuta. Iyo yekupukuta nyoro ine zvinovaka muviri zvinodiwa kune bvudzi, zvakakwana kuchengetedza bvudzi rako kupenya kwezuva, uye zvinobudirira kubvisa marara uye mafuta akawandisa pamusoro wemusoro. ...
Mhuri mazuva ese akachena chipfuwo akachengeteka ane hunyoro nyoro nyoro
ZVAKANAKA zvakaburitsa mhuri nyowani yekupukuta mhuka. Iko kukura kweye tauro repepa rakakura zvakakwana. Uku kunyorova kunoitwa nezvinhu zvakasikwa. Iyo ine hushamwari, yakachengeteka uye haina kukuvadza kune dzinovaraidza. Imbwa yepamusoro inopukuta maziso imbwa ...
Denda iri richiri kuenderera mberi. Iyi ihondo umo munhu wese ari kutora chikamu asi hapana pfuti. Pamusoro pekutsigira mutsara wepamberi nepese pavanogona napo, vanhuwo zvavo vanofanira kuzvidzivirira uye kudzivirira hutachiona, kudzivirira denda kuti riitike ku ...
Mutambo wegore negore weLazada 9.9 wekutenga wakaparurwa zviri pamutemo munyika nhanhatu dzeSoutheast Asia. Zvakasiyana nemakore apfuura, Lazada yakazivisa zviri pamutemo kukwidziridzwa nyowani kwayo inotungamira brand mall LazMall, panguva yemutambo wekutenga 9.9 gore rino. Batsira zvigadzirwa, vatengesi uye vanobvumirwa kugovera ...
Muna 2020, nyika yapinda muhondo huru yekurwisa COVID-19
Muna 2020, nyika yapinda muhondo huru yekurwisa COVID-19. Hondo iyi yakareba kudarika zvaitarisirwa. Muna Gumiguru, ZVAKANAKA zvakaparura hutachiona hutsva uye mishonga yekudzivirira mabhakitiriya. Iyi F & U inoraswa mishonga inouraya utachiona ine mukomboni-cheni mbiri quaternary ammonium s ...
Usasarudze zvakashata zvinopukuta izvo yako ba ...
Infant nyorova ndokupisika kuongorora: izvi nyoro WI ...
Zvinhu zvakanaka ｜ Special kuchenesa unopukuta d ...
Wet zvipukuta zvakagadzirwa ne100% donje vane ganda-fr ...